Otu onye ọrụ chọpụtara na SD855 nke Meizu 16S ya enweghị nrapado | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya Meizu banyere esemokwu banyere ọkọlọtọ ọhụrụ ya Meizu 16S. Saa mfonini yi ma yehu ade titiriw bi a enti ɛsɛ sɛ yedi ahurusi XYZone, onye Weibo a ma ama na-eji China eme ihe, a hụkwa quirk na ya.
Mgbe o lechara ndị internals anya, onye ọrụ ahụ hụrụ nke ahụ gị Meizu 16S unit enweghị nrapado gburugburu processor Snapdragon 855 onye agha na efere. N'ịtụle otú ọtụtụ ọkọlọtọ dị n'ahịa si enweta nrapado a maka onye nhazi ahụ, o kwuru na nke a nwere ike ịbụ nchekwa ego sitere na ụlọ ọrụ ahụ.
Meizu agọnarịrị ebubo ahụ. Otú ọ dị, mgbe nsogbu ahụ toro, o kpebiri iziga otu ndị injinia na Shenzhen iji nyochaa ngalaba XYZone. Ndị otu ahụ kwenyere na ngalaba ha enweghị nrapado ahụ, mana ha kwukwara na ọ bụ ikpe pụrụ iche. Mgbe Meizu chọpụtara na otu ha nwere nsogbu, o kpebiri iji nkeji abụọ nke otu ụdị ahụ mejupụta ya.
Mgbe nke a gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ malitere vidiyo ọhụrụ na Weibo na-egosi usoro mgbakọ nke nhazi Snapdragon 855 na Meizu 16S. Na vidiyo, nke ị nwere ike ịlele site na njikọ a, enwere akụkụ ebe anyị nwere ike ịhụ nrapado nke etinyere gburugburu processor nke ekwentị.
Ekwesighi iwere ihe omume a dika ihe ojoo. Decho, mgbe emechara nzaghachi, O doro anya na Meizu na-eji nzaghachi ndị ahịa akpọrọ ihe. Vidio ahụ bụ ezigbo ụzọ iji mee ka ndị na-eso ụzọ gị nwee ntụkwasị obi, ma na China ma gburugburu ụwa.
Meizu na-akwadebe igwefoto mbụ ya na igwefoto na-agbapụta agbapụta
Ma nke a ọ bụ n'ezie ihe dịpụrụ adịpụ ka ga-ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị kwesịrị ịhụ ọtụtụ ikpe ọzọ na ụbọchị ndị na-abịanụ. Ka ọ dị ugbu a, otu onye ọrụ ahụ kọọrọ na nke ya Xiaomi Mi 9 o nweghi ihe mmado a. Xiaomi ekwughi okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu onye ọrụ chọpụtara na Snapdragon 855 na Meizu 16S ya enweghị nrapado
Egwu YouTube na Google Play Music nwere ndị debanyere aha nde 15, nke dị egwu karịa Apple Music na Spotify